ဖူဆယ်သည် Marquette ပန်းခြံသို့လာသည်• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Futsal သည် Marquette Park သို့လာသည်
အပေါ် Posted စက်တင်ဘာလ 6th, 2021
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့သောစိတ်ကူးသည်နောက်ဆုံးတွင်လက်တွေ့ဖြစ်လာသည် Marquette ပန်းခြံမရ။ မကြာမီ Dutchtown ရပ်ကွက်သည်စိန့်လူးဝစ်မြို့၌ပထမဆုံးပြင်ပဖူဆယ်ကွင်းရှိလိမ့်မည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ပြည်တွင်းဘောလုံးဝါသနာအိုး Daniel Flynn၊ Dutchtown အိမ်နီးချင်းနှင့် UMOJA ဘောလုံးအသင်း တည်ထောင်သူ Fred Maboneza နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ အဖွဲ့သည် Marquette Park အပန်းဖြေစင်တာတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Flynn သည်ထိုနေရာတွင်အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်ဥရောပ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရနိုင်သောဖူဆယ်ကွင်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ Flynn က“ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကငါ UMOJA ဘောလုံးအသင်းနဲ့စလုပ်ခဲ့တယ်။ “ ကျွန်တော်တို့ဖူဆယ်ကစားဖို့နေရာတွေရှာဖို့အမြဲရုန်းကန်နေရလိမ့်မယ်။ ဘောလုံးဟာလွတ်လပ်ပြီးလူတိုင်းလက်လှမ်းမီရမယ်လို့ငါတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ရတယ်၊ အဲဒါစိန့်လူးဝစ်မှာစံပြဖြစ်လိမ့်မယ်။ ”
အဖွဲ့သည်စိန့်လူးဝစ်မြို့အတွက် Parks and Recreation programmer ဖြစ်သူ Bill Bixon နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး Marquette Park ၌ဖူဆယ်ကစားကွင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်မည့်အရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဖြေမှာပတ်ဝန်းကျင်ရှိမိတ်ဖက်များ၊ စွမ်းအင်များစွာနှင့်အချိန်ဖြစ်သည်။
"Marquette Park သည် South Side ရှိဘောလုံးကစားရန်အိမ်ဖြစ်သည်"ဟု Dutchtown Main Street ဥက္ကဋ္ဌ Nate Lindsey ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီအစဉ်အလာကိုဆက်ထိန်းနိုင်ပြီးငါတို့လူငယ်တွေကစားပွဲကိုပျော်ရွှင်စရာနေရာတစ်ခုပေးနိုင်တဲ့ပြည့်လျှံတဲ့ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းကိုထူးခြားတဲ့ထပ်တိုးလာဖို့အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ”
အဆိုပါ စိန့်လူးဝစ်မြို့ပန်းခြံဌာန သင်္ဘောပေါ်မှပထမဆုံးခုန်ချသောအဖော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပန်းခြံသည်စီမံကိန်းကိုစတင်ရန်စီစဉ်ပြီး Marquette Park Field House ဘေးရှိရှိပြီးသားနှင့်ကြာရှည်စွာပျက်ကျနေသောဘော်လီဘောကွင်းများပေါ်တွင်ကတ္တရာစေးအသစ်လောင်းရန် Streets Division နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကတိပြုသည်။
မေဂျာလိဂ်ဘောလုံးအသင်းသစ်နှင့်ပုဂ္ဂလိက-အစိုးရပူးပေါင်းခြင်း စိန့်လူးဝစ် CITY SC, Dutchtown ပင်မလမ်းများ Marquette Park ၏မဟာမိတ်များ၊ Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်း, STL လုပ်ပါ, Raineri ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း, McConnell နှင့်အပေါင်းအသင်းများပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များစွာနှင့်စီမံကိန်း၏ကျန်အပိုင်းအစများသည်အတူတကွစုဝေးလာသည်။
“ Marquette Park ရှိအလုပ်သည် MLS ကလပ်နှင့်အလုပ်အပါအ ၀ င်လူထုအားအဓိကထားသည်” ဟု 20th Ward Alderwoman Cara Spencer ကပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီနှစ်မှာ Marquette Park Pool မှာပြောင်းလဲနေတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးလာမယ့်နှစ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဦး စားပေးဖော်ထုတ်ဖို့ရပ်ရွာနဲ့လက်တွဲသွားလိမ့်မယ်။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကသူတို့ရဲ့အခွန်ဒေါ်လာတွေကိုသူတို့လိုချင်တဲ့နေရာကို ဦး ဆောင်တာဘဲ။ ”
အဆုံးထုတ်ကုန်သည် South St. Louis ၏အလယ်ဗဟိုတွင်အများပြည်သူအားလုံး ၀ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ထူးခြားသောဖူဆယ်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ တရားရုံးတစ်ခုလုံး၏ဒီဇိုင်းကိုနံရံဆေးရေးပန်းချီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည် စိန့်လူးဝစ်အနုပညာရှင် Jayvn Solomonမရ။ ပန်းချီကားသည်အနုပညာရှင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်လ်၊ ဘောလုံးအသင်းနှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်တို့အပါအ ၀ င်ပန်းချီကားများကိုဝင်းအတွင်း၌သာမကကစားသမားများသာမကပန်းခြံပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါအရောင်အသွေးစုံသောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးသည်။
နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုမရွေးချယ်မီ Marquette Park နှင့်မဟာမိတ်များဖြစ်သော Dutchtown South Community Corporation နှင့်လက်တွဲသောရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များသည်နံရံဆေးရေးပန်းချီများကိုအလေးချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
MADE STL မှပြုလုပ်သောစိတ်ကြိုက်ပန်းတိုင်များသည် St. Louis CITY SC နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်နှစ်ခုလုံး၏အမှတ်တံဆိပ်များပါ ၀ င်သည်။ ပန်းတိုင်များတွင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သောသတ္ထုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပိုက်ကွန်များရှိပြီးရာသီဥတုနှင့်အသုံးပြုမှုမှစုတ်ပြဲမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
Marquette Park အတွက်အလုံးစုံအစီအစဉ်တစ်ခုပြီးစီးပြီးနောက်ဖူဆယ်ကွင်းသည်ပထမဆုံးအဓိကစီမံကိန်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ယခင်အစီအစဉ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ စုဝေးခဲ့သည် PGAV စီမံကိန်း အလုပ်သင်နှင့် ၀ ါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား Tiffany Dockins ယခုအခါ Dockins သည်ပန်းခြံအစီအစဉ်နှင့်နှစ်ခုစလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် Dutchtown South Community Corporation နှင့်အလုပ်လုပ်သည် Green Schoolyards ပဏာမခြေလှမ်း Froebel မူလတန်းကျောင်းတွင်
“ လူငယ်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ရဲ့အမြင်မှာ Marquette Park ကမျှတတဲ့အမြင့်ကိုတက်ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကရိုးရှင်းပါတယ်” ဟု Dockins ကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဒေသခံများနှင့်ရပ်ရွာမိတ်ဖက်များထံမှဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ Marquette Park သည်ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးအမှန်တကယ်ထိုက်တန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုရရှိလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။ "
ဒါဆို ... Futsal ဆိုတာဘာလဲ။
ဖူဆယ် ဥရုဂွေးနိုင်ငံမှဆင်းသက်လာသောတောင်အာဖရိကတစ်ဝန်းလုံး၌လူကြိုက်များလာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်လာသောဘောလုံးပုံစံငယ်ပုံစံနှင့်ဆင်တူသည်။ အိမ်တွင်း၌လည်းကစားလေ့ရှိပြီးကစားပွဲကိုမာကျောသောမျက်နှာပြင်ရှိသေးငယ်သည့်ကစားကွက်နှင့်ကစားအားနည်းပြီးပိုမိုသေးငယ်ခိုင်မာသောဘောလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ဖူဆယ်ပွဲစဉ်များကိုကစားသမားငါး ဦး နှင့်တစ်ဖွဲ့စီကစားရပြီးပွဲချိန်မိနစ် ၂၀ တွင်နှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။
စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းတွင်ဖူဆယ်ကွင်းအသစ်သည်ကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ စိန့်လူးဝစ် CITY SC သည်အိမ်နီးချင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်စနေနေ့တွင်ပွဲစတင်ရန်စီစဉ်သည်။ ကိုသွားကြည့်ပါ Dutchtown ပြက္ခဒိန် သို့မဟုတ်အကြှနျုပျတို့ကိုလိုကျနာ Facebook က, Instagram ကိုနှင့် တွစ်တာ ဤပွဲနှင့်လာမည့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန် Marquette Park သတင်း.
အောက်မှာ Filed Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ်, Dutchtown ပင်မလမ်းများ, Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် စက်တင်ဘာလ 6th, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette ပန်းခြံ Futsal သည် Marquette Park သို့လာသည်